किन्नु अघि थाहापाउनुस् इलेक्ट्रीक सवारीसाधनका १२ तथ्य
1:48 pm, मंगलबार, वैशाख ३१, २०७६
काठमाडौं । भोल्टस्, वाट्स, एमपिएस (MPS) जस्ता प्राबिधिक शब्दहरुले तपाईंलाई धेरै अल्मल्याउँछ होला । तपाईंलाई केडब्लुएच (kWh) र केडब्लु (kW) जस्ता ‘जार्गन’ले पनि तनाव दिन्छन् होला ।
तर, केही छैन, इलेक्ट्रिक भेइकलका (ईभी) बारे बुझ्न तपाईंहरुको सजिलो हुने गरि हामी यहाँ त्यस्ता कही आधारभुत शब्द र अवधारणाका बारे चर्चा गर्दैछौं ।
ईभी अटो क्षेत्रको पछिल्लो क्रान्ति हो, जसले १ सय ३३ बर्ष लामो इतिहास भएको यो क्षेत्रलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ ।
ईभीका आधारभुत पुर्जाहरु के–के हुन् ?
अहिले ईभीमा दुई खाले मोटरको प्रयोग भइरहेको छ । डिसी (DC) मोटर चल्तिको छनोट हो, जुन बिशेष गरि दुई पाङग्रे र इलेक्ट्रिक कारहरुमा प्रयोग हुन्छ ।
यसमा चुम्बकीय क्षेत्रको निर्माण गर्न दुई वा सो भन्दा बढि चुम्बकको प्रयोग हुन्छ । चुम्बकीय क्षेत्रले गाडी गुड्न मद्दत पुयाउँछ ।
यो चाहीँ गाडी पिच्छे फरक हुन्छ । ‘फ्रन्ट ह्वील’ गाडीमा मोटर अगाडि राखिएको हुन्छ भने ‘रियर ह्वील’ गाडीमा पछाडि । अगाडी पछाडि नै मोटर राखिएमा यसले गाडीलाई ‘अल–ह्वील’ ड्राइभ बनाउँछ । केही शक्तिशाली गाडीमा भने मोटर प्रत्येक चक्कामा राखिएका हुन्छन् ।
केडब्लु (kW) र केडब्लुएच (kWh) का बिचमा के फरक हुन्छ ? कुन ब्याट्रीका लागि र कुन चार्जरका प्रयोग हुन्छ ?
ब्याट्री सेलमा ‘पोजिटिभ इलेक्ट्रोड’, ‘नेगेटिभ इलेक्ट्रोड’ र ‘इलेक्ट्रोलाइट’ समावेश हुन्छन् । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो की सामान्य गाडीमा ‘लिड–एसिड’ ब्याट्रीको प्रयोग हुन्छ र केही हाइब्रिडमा भने ‘निकेल मेटल हाइड्राइड’ ब्याट्रीको प्रयोग हुन्छ । अहिले ईभी उत्पादकहरुले भने ‘लिथियम आयोन’ ब्याट्रीको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
माइलेज ब्याट्रीको आकार र रसायन, गाडीको तौल, चालकको चलाउने तरिका आदि कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले महिन्द्रा इटुओले ११ केडब्लुएच (kWh) को ब्याट्रीबाट १ सय १० किलोमिटर माइलेज दिदैं गर्दा हुन्डाई कोनाले ३९.२ केडब्लुएच (kWh) को ब्याट्रीबाट ३ सय ५० किलोमिटरको माइलेज दिइरहेको छ ।
फोनको ब्याट्री तुलनात्मक ढंगले सानो हुन्छ । करिब १ सय ग्राम जतिको । तर, गाडीको ब्याट्री ५ सय किलोग्राम भन्दा गह्रौं हुन्छ । तर, ईभीको प्रयोग बढेसँगै ब्याट्रीको लागत कम हुँदै जानेछ ।
धेरै इभीकोे ब्याट्री एसी (AC) र डिसी (DC) को माध्यमबाट चार्ज गर्न सकिन्छ । एसी (AC) स्टेशनहरु सामान्यत घरमै हुन्छन् र यहाँ चार्ज गर्न केही बढी समय लाग्छ । डिसी (DC) चार्जिङ स्टेशनको माध्यमबाट भने गाडी चाँडै चार्ज हुन्छ ।